အကြံထပ်ပေးကြည့်ပါသည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အကြံထပ်ပေးကြည့်ပါသည်
Posted by saund on Oct 4, 2010 in Copy/Paste, Letter to The Editor, Opinions & Discussion, Other - Non Channelized | 8 comments
Do & Don’t ဆိုတဲ့ အက်မင်ရဲ့ ပို့ စ်ကို ဖတ်ကြည့်ပါတယ်။
စာမူတွေများလွန်းလို့အယ်ဒီတာတွေ မစစ်နိုင်တာ လက်ခံပါတယ်။တိုင်သူများလာရင် အတိုင်ခံရတဲ့ ပို့ စ်ကို ဘယ်လို ဆက်လုပ်သင့်သလဲ ဆိုတာလည်း အကြံပေးထားဖူး ပါတယ် ။ မူရင်း ကူးချ ကူးချလက်ခံ ဆိုတဲ့ ပို့ စ်မှာပါ။
မူရင်းကို ခိုးကူးတာ အထောက်ထားနဲ့ ပြနိုင်ရင် ခိုးကူးထားတဲ့ ပို့ စ်တွေကို ဒီသတင်းစာမှ ဖြုတ်နိုင် ဖျက်ပစ်နိုင်မလား လို့သိပါရစေ။
ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးတဲ့ အနုပညာတခုကို သူတပါးက နာမည်ယူနေရင် မူလပိုင်ရှင်တွေ အနေနဲ့ဒီသတင်းစာကို ဖော်ရန် လို့ သဘောထားပါ လို့ ဆိုရင် တခြား အွန်လိုင်းသတင်းစာအုပ်စုက လည်း မန်းရတနာပုံ နာမည်နဲ့ ဆင်တူရိုးမှား လိုက်တုရင် ဒီသတင်းစာကရော အထက်က အယ်ဒီတာကြီး ပြောခဲ့သလို သဘောထားကြီးနိုင်ပါမလား။
လောလောဆယ် ကူးချခံရတဲ့ ဘလော့ကာတွေအနေနဲ့ခိုးရာပါပစ္စည်လက်ခံဝဒ်ဆိုဒ်လို့သတ်မှတ်ပြီး ဘာမှ မလုပ်နိုင်လို့လက်မှိုင်ချ မခံချည့်မခံသာ စိတ်ပျက်နေကြရပါတယ်။
bigcat ပြောသလို ဒီသတင်းစာမှာ ခိုးကူစာမူတွေကို ဖြုတ်ထုတ်သတ် လုပ်ခဲ့လေသလား ဆိုပြီး ရှာကြည့်ပါတယ်။ ဒုံရင်းက ဒုံရင်း ပါဘဲ။ ခိုးကူးစာပေကို လက်ခံတင်ထား ဆဲပါ။
မူရင်းခိုးကူးခံရတဲ့ပို့ စ်တွေ ဒီသတင်းစာထဲက ပြုတ်တော့မှဘဲ ဒီသတင်းစာ ကို စာဖတ်သူတိုင်း လေးစားလာမှာ သေချာ ပါတယ်။ ဘလော့စပေါ့ဆိုဒ်ကို မြန်မာနိုင်ငံက ဘန်းထားတော့ မြန်မာနိုင်ငံက စာဖတ်သူတွေ မဖတ်နိုင်ပေမဲ့ အမေရိကားက ဒီသတင်းစာ အယ်ဒီတာတွေအနေနဲ့ဖတ်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
အပြစ်တင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ဖို့ ရယ် ဆွေးနွေးတာပါ။ ဒီသတင်းစာကို စာဖတ်သူတိုင်းက လေးစားတမှု့ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ ရယ်က ဒီသတင်းစာရဲ့ မူ စည်းကမ်း ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက စာရေးသူတွေအတွက် စာမူခပေးတာ ကို လေးစား မိပါတယ်။ အင်တာနက်ဖိုးက ဈေးမသေးတဲ့အတွက် စာမူခ ပေးတော့ အနုပညာရှင်တွေ အတွက် အနုပညာ ဖန်တီးရတာ ကိုဘဲ ပီတီဖြစ် ၀မ်းမြောက်မိကြမှာပါ။ ရတဲ့ စာမူခ ထက် အင်တာနက်ဖိုးက ပို နိုင် ပါတယ်။ ကိုးနတ်ရှင်နှေးရင် မီးပျက်ရင် အချိန်ကုန်ခံ ငွေကုန်ခံ ရေးကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲက စာရေးသူတွေ အတွက် ကျွန်မက ကျေးဇူးတင် လေးစားမိပါတယ်။
ဘလော့ကာ တွေနဲ့ အတူ တခြားတခြားသော ဖိုရမ် မဂ်ဂဇင်းတွေရဲ့ အလယ်မှာ စာမူသူခိုးလက်ခံသတင်းစာ လို့နာမည်ပျက် နေတဲ့ အတွက် ဒီသတင်းစာရဲ့ စည်းမျဉ်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရင် သတင်းစာအတွက်ရော မူရင်းစာပေ ဖန်တီးသူ အနုပညာရှင်တွေ အတွက်ပါ ကောင်းမှာပါ။ နောက်တချက်က ဒီစာမူတွေအတွက် ငွေအကုန်ခံ ဆာဗာဆောက်ပြီး တင်ထားရတာလည်း နှမျှောမိလို့ အကြံပေးအပ်ပါတယ်။
ခိုးကူးစာမူတွေကို အချိန်တိုအတွင်း ချက်ချင်း မဖြုတ်နိုင်တာ လက်ခံပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဖြုတ်နိုင်ရင် ကောင်းပါမယ်။ သာမာန် စာဖတ်သူ တွေ အနေနဲ့ လည်း ခိုးကူးစာမူတွေကို ပြန်ဖတ်နေရတဲ့အတွက် စိတ်ပျက်နေတာ အမှန်ပါဘဲ။ မူရင်း ကူးချ ကူးချလက်ခံ မှာ ၀င်ရောက် ရေးထားတဲ့ ကော်မဲန့် တွေကို အက်မင်တို့ အယ်ဒီတာတို့ အချိန်ရရင် ဖတ်ကြည့် စေချင် ပါတယ်။
အယ်ဒီတာ့ထံ ပေးစာဆိုပြီး tag ဖွင့်ထားတော့ ပင်မစာမျက်နှာမှာ မပေါ်ဘူးဗျ။ ဒီတော့ပစ်က ဟော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာရဲ့ အဆက်ဆိုတော့ တက်ဂ်ပြောင်းလိုက်ပါလား။ ကွန်းမန့်တွေ ပိုဖတ်ခွင့်ရတာပေါ့။
အယ်ဒီတာ ထံ ပေးစာ ဆို ပင်မ စာမျက်နှာမှာ မပေါ်ဘူးလား.. ဒါဆိုလည်းကောင်းတာဘဲ.. အတိုင်အတော ထူချင်တာတွေ များနေလို့.. ဟီးဟီး..
တဟီးဟီးနဲ့ ဘယ်လို ဖစ်နေတာလဲ
ဆွေးနွေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တတ်သလောက် မှတ်သလောက်ဖြေသွားပါမယ်။ ဆက်ဆွေးနွေးပေးပါ။ တခြားမန်ဘာတွေေ၇ာပေါ့။
ဖြုတ်ပါတယ်၊ ကျန်နေရင် ထပ်ပြောပါ။ အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး အရင်ကတည်းက တွေ့ရင်တွေ့သလိုဖြုတ်ခဲ့တာပါ။
စာပေသူခိုးတချို့က သူများစာတွေ ဒီမှာလာတင်ရင် ကျုပ်တို့က ဘာအကျိုးအမြတ်ရပါသလဲ။ အဲဒီအတွက်လည်း ပွိုင့်၁၀၀ ပေးရတာမို့ အကုန်အကျတောင်ရှိပါသေးတယ်။ အထောက်အထားနဲ့ ဖျက်ဖို့တောင်းဆိုရင် ၀မ်းသာအားရတောင် ဖျက်ပေးချင်ပါတယ်လို့ ပြောပါရစေ။
မူရင်းပိုင်ရှင်က အဲဒီပွိုင့်သူနဲ့သာဆိုင်ပါတယ်။ မဖြုတ်ပဲ ဒီမှာမန်င်ဘာဝင်ပြီး အဲဒီရသင့်တဲ့ပွိုင့်လွဲပေးပါတောင်းဆိုရင်လည်း လွှဲပေးဖို့ လုပ်ရမှာသာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှ ရီပို့ပေးနိုင်တဲ့ စံနစ်ထည့်ထားတာမို့ နည်းနည်း ပိုလွယ်လာတယ်ဆိုပါတော့…။ အဲဒါတချို့ က ဘယ်လိုရီပို့ ပေးသလည်းဆိုတာကို ..အောက်မှာ လေးနည်းနည်းကြည့်ပါဦး။ Report ပထမ အခု ၂၀ကိုစစ်တာမှာ တကယ်ဖျက်ခိုင်းတဲ့ ထပ်နေတယ်ပြောတာ တခုမှမပါပဲအဲဒါမျိုးတွေဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါ ဖျက်တဲ့အယ်ဒီတာလည်း လုပ်ချင်လုပ်.. မလုပ်ချင်မလုပ်ပဲဖြစ်ပါလေရော..။ပြောချင်တာက အဲဒီလိုလုပ်ကြရင် ဖြုတ်သူတွေ အလွန်အလုပ်ပိုတာပဲရှိပါတယ်။ နောင်အဲဒီလိုစာတွေ… အဲဒီရီပို့နေရာ မရေးကြဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။
– Right ! I always remember porem.
– မြန်မာအမျိုးသမီးလေးများသတိပြုရန် > Misleading/Abusive Contents(တိုက်ခိုက်၊သွေးထိုးလှုံ့ဆော်)
– bar lel ma thi bu ha
– ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…..ဗဟုသုတအဖြစ် ထပ်ဖြန့် ပေးပါ့မယ်…..
– ရေးထားတဲ့အကောင်တော့ရူးနေလားမသိဘူး ငါတော့ဒီလိုထင်တာပဲ မင်းကော ဘယ်လိုထင်လဲ
ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးတဲ့ အနုပညာတခုကို သူတပါးက နာမည်ယူနေရင် မူလပိုင်ရှင်တွေ အနေနဲ့ဒီသတင်းစာကို ဖော်ရန် လို့ သဘောထားပါ လို့ ဆိုရင် တခြား အွန်လိုင်းသတင်းစာအုပ်စုက လည်း မန်းရတနာပုံ နာမည်နဲ့ ဆင်တူရိုးမှား လိုက်တုရင် ဒီသတင်းစာကရော အထက်က အယ်ဒီတာကြီး ပြောခဲ့သလို သဘောထားကြီးနိုင်ပါမလား
သတင်းစာနဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို ရောမြင်နေတယ်ထင်ပါတယ်။ (ကျုပ်ပဲ မရှင်းမရှင်း တနေရာရာမှာေ၇းမိသလား မသိပါ။ တွေ့ရင် ထောက်ပြပါ။)
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ဟာ သတင်းစာမဟုတ်ပါဘူး။ ၀က်ဘ်ဆိုက်ဟာ သတင်းစာမှာဖေါ်ပြတဲ့စာတွေ၊ သတင်းတွေအတွက် သတင်း၊ စာမူရွေးချယ်ရာ နေရာ တခု(တခု)သာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ဖွင့်ပြီး အချိန်ကစလို့ မန်င်ဘာတွေထဲကနေ သတင်းစာမှာပုံနှိပ်ဖေါ်ပြဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာ စုစုပေါင်း ပို့စ် ၅၈၂၂ ကနေ.. စာမူ၁ခု၊ (၁)ခုပဲရှိပါသေးတယ်။
ဒါတောင်အဲဒီစာမူက ဒီအတိုင်းပြန်လည်ဖေါ်ပြတာမဟုတ်ပါဘူး။ စာရေးသူကိုယ်တိုင် အယ်ဒီတာအကြံပေးတဲ့အတိုင်း အချက်အလက်တိကျမှုရှိဖို့အတွက် အကြိမ်ကြိမ်ပြန်စစ်ပြီးမှ သတင်းစာမှာထည့်လိုက်တာပါ။
မန္တလေးဂေဇက်ဟာ ဘယ်အွန်လိုင်းအုပ်စုနဲ့မှ မတူပါဘူး။ ဘယ်မြန်မာသတင်းစာမှနဲ့လည်းမတူပါဘူး။ အဲဒီအကြောင်း ဆ၇ာကြီးမောင်သာရတောင် အာဖက်အေလား၊ ဗီအိုအေကလားမသိ အသံလွှင့်ပြောဖူးတယ်။
မန္တလေးဂေဇက်ကို မြန်မာစာပေကို ချစ်တဲ့ လူ၂ယောက်ထဲက ကိုယ်အိပ်ကိုယ်စိုက်ပြီး တည်ထောင်ထားတာပါ။ ၃၂မျက်နှာရှိတဲ့သတင်းစာကို အခမဲ့ဝေတာပါ။ အခုမှထလုပ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၀၆ထဲက စလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစိတ်ကို http://en.wikipedia.org/wiki/Mandalay_Gazette မှာဖတ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
အဲဒီတော့ .. ဆင်တူယိုးမှားလိုက်လုပ်နိုင်တဲ့သူရှိရင် လုပ်ပါစေလို့ပဲပြောရမှာပဲ။ ဒါမျိုးလုပ်နိုင်လေ.. မြန်မာတွေအတွက် ကောင်းလေမဟုတ်ပါလား၊
သတင်းစာမှာပါတဲ့သတင်းတွေ၊ ဆောင်းပါးတွေ ကူးယူချင်ကြပါသလား။ ကူးပါစေခင်ဗျား။ များများနဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖတ်ကြနိုင်ဖို့၊ မှတ်တမ်းအဖြစ်နောင်နှစ်ရာချီကျန်ရစ်ဖို့ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရရင် ယူအက်စ်မှာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ သတင်းစာမှာစာရေးတာ။ သတင်းပို့တာ စာမူခ၊ သတင်းပို့ခ တပြားမှ မယူကြပါဘူး။ အားလုံးအခမဲ့ ကိုယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်၊ ကိုယ်စာရွက်နဲ့ကိုယ် လုပ်အားလှူပြီးလုပ်ပေးနေကြတာပါခင်ဗျား။ အဲဒီတော့ အဲဒီအခမဲ့သတင်းပို့လာတဲ့သတင်း။ စာမူကို ခိုးယူသုံးရက်ရင်သုံးပါစေပေါ့။ တကယ်လို့ မူရင်းစာမူရှင်က အဲဒါမျီုးကိစ္စအတွက် ခိုးသူဆီက တခုခုဖြေရှင်းခိုင်းပေးပါတောင်းဆိုရင် မန္တလေးဂေဇက်က ယူသုံးထားသူတွေကို စာပို့သတိပေးတာတွေ။ ဘာတွေညာတွေလုပ်ပေးလို့တော့ရပါတယ်။ ယူအက်စ်ရုံးစိုက်တဲ့ တရားဝင်မီဒီယာဖြစ်တာမို့ ဒီက ဥပဒေတွေအတိုင်း လုပ်သင့်တာ လုပ်ကြရယုံပဲရှိပါတယ်လို့ပါခင်ဗျား။
သတင်းစာရဲ့ ရပ်တည်ချက်နဲ့ သဘောထားကို အခွင့်သင့်တုံး ရှင်းပြရတာပါ။ bigcat မေးထားတာလေးလည်းဖြေရင်းဆိုပါတော့။
ဘလော့ကာ တွေနဲ့ အတူ တခြားတခြားသော ဖိုရမ် မဂ်ဂဇင်းတွေရဲ့ အလယ်မှာ စာမူသူခိုးလက်ခံသတင်းစာ လို့နာမည်ပျက် နေတဲ့ အတွက် ..
မြန်မာဖိုရမ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ တချို့ က သူများသတင်းတွေတင်တယ်။ ပြန်ဆွေးနွေးကြတယ်။ တချို့ က ဆယ်လီဘရိတ်တီပုံတွေတင်တယ်။ ဆွေးနွေးဝေဖန်ကြရင်း အပန်းဖြေကြတယ်။ တချို့ က နိုင်ငံခြားမီဒီယာက မူပိုင်ခွင့်ရှိနေတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ။ ပုံတွေ။ စာတွေတင်တယ်..။ အဲဒီလိုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖိုရမ်တွေကို စာမူသူခိုးလက်ခံလို့ သုံးရင်ရပါသလား မသိပါ။
မန္တလေးဂေဖက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကတော့ ကိုယ်ဟန်နဲ့ဆက်လုပ်ပါဦးမယ်။ ကြုံလို့ ပြောရရင် ဒီဝက်ဆိုက်ရဲ့အခြေခံ အတွေးကို Digg, Reddit and Helium တို့ကနေ မြန်မာမှုပြုယူတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ မင်န်ဘာ(writers)တွေတင်တဲ့စာတွေအတွေက် တာဝန်ယူရမှုတွေ၊ စည်းကမ်းတွေနည်းနည်းသွားဖတ်ကြည့်ရင် ရှင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ ကျုပ်ကြိုက်တဲ့ စာလေးတပိုဒ်အောက်မှာကူးတင်ပေးပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပါ။
အဲဒီမှာ writers တွေက သူများစာတွေခိုးတင်ကြလို့ဆိုပြီး သူတို့ကို သူခိုးဝက်ဘ်ဆိုက်သွားပြောရင်တော့ တော်တော်ရယ်စရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်လို့ဆိုရမှာပါပဲ။
ဒီမှာ မန်ဘာ၂ထောင်ကျော်ရှိတဲ့အထဲက လူတချို့က စာတွေခိုးကူးတင်လာတာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ၀က်ဘ်ဆိုက်တခုလုံးကို သူခိုးဝက်ဆိုက်လို့ နာမယ်ဖျက်နေရင် ကျန်တဲ့ ကိုယ့်အတွေးကိုယ်ချရေးနေသူ၊ စာရေးနေသူတွေအများစုကို စော်ကားနေတာတမျိုးလို့လည်းယူဆနိုင်တာပါပဲ။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်လို လူတွေစုနေတဲ့အခါမှာ တဦးတည်းပိုင်တဲ့ဘလော့ဂ်တခုလိုမဟုတ်ပဲ အင်မတန်တော်တဲ့သူတွေရှိမယ်၊ သူခိုးတွေရှိမယ်။ ညစ်တဲ့သူတွေရှိမယ်။ လူမျိုးခွဲသူတွေရှိမယ်။ ဘာသာမတူသူတွေရှိမယ်။ အတန်းပညာအဆင့်အတန်းမတူတွေရှိမယ်။
ဒီအထဲမှာ ဒေါက်တာအဆင့်ပညာသင်နေသူ။ တတ်ပြီးသူတွေရှိတယ်။ ဆရာတော်တွေရှိတယ်။ မာစတာအောင်ပြီသူတွေရှိတယ်။
အားလုံးကိုခြုံပြော စွတ်စွဲလို့ ရနိုင်ပါသလား။
၀က်ဘ်ဆိုက်ထဲမှာရေးရင် လိုက်နာရမှာတွေ အလျှင်းသင့်သလိုတင်သွားပါတယ်။ သဘောမတူတာ၊ မကြိုက်တာတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးပါ၊ ပြောပါ၊။
အရင်ကတည်က မင်းတုန်းမင်းပြောတဲ့စကားတင်ထားတာပါ။ အလကားတင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ အများသဘောအတိုင်းလုပ်ကြတာပေါ့။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ အားသာချက်က မန်ဘာများကသာ စာမူတွေ၊ခိုးကူးတာတွေ.။ ဝေဖန်တာတွေအားလုံးကို ဆင်ဆာမရှိပဲကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာစာလာတင်ရင် စာမူခပေးတယ်လို့ နားလည်မှုလွဲနေမယ်ထင်ပါတယ်။ စာမူခထက်စာရင် အင်တာနက်ဖိုးလေးကို တတ်နိုင်သလောက်ဝင်ဖြည့်တာပါလို့ပဲ ပြောရမှာပါပဲ။ မြန်မာပြည်ပြင်ပနေသူတွေကို ငွေမှ မပေးတာကိုးခင်ဗျာ၊ သေသေချာချာနားလည်စေချင်ပါတယ်။
အစတုံးက တပုဒ် ၅၀၀ပွိုင့်(ကျပ်) နဲ့စခဲ့တာပါ။ ငွေကြေးအခြေအနေအရ ချိန်ဆပြီး လျှော့ချလာရတာကို နားလည်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါက ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို အချိန်တိုတိုအတွင်း လူအ၀င်များလာအောင် လုပ်တဲ့ မားကက်တင်းနည်းလမ်းတခုလို့လည်း ယူဆချင်ယူဆနိုင်မှာပေါ့။
ထပ်ပြောပါရစေ။ အဲဒါစာမူခမဟုတ်ပါဘူး။ သတင်းစာမှာ ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြမယ်ဆိုမှ စာမူခက သီးသန့်လာမှာပါ။ တပုဒ်ကို ဒေါ်လာ ၂၀ကနေ ၄၀လောက်အထိ ပေးမယ်လို့ရေးထားပါတယ်။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ ကုန်ကျစံရိပ်၊ ပွိုင့်ပေးစံနစ်၊ ၀က်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ ဆော့ဝဲဖိုး။ ထိမ်းသိမ်းခ၊ အခုကျုပ်စာေ၇းတဲ့လုပ်အားခ၊ အယ်ဒီတာခ အပါအ၀င် ဘယ်တခြားသူကမှ ကျခံနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ကမှလည်း အလှူငွေတပြားမှမရပါဘူး။ အခုထိလည်း စပွန်စာဆိုပြီး ကြော်ငြာလာထည့်တဲ့သူ တယောက်မှမရှိပါဘူး။
သတင်းစာတော့ အခုထိ၎နှစ်သက်တမ်းကျော်တဲ့အထိရပ်နေနိုင်တယ်။ ယူအက်စ်တနိုင်ငံလုံးက မြန်မာတွေလည်းသိတယ်..။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက် ဒီစံနစ်နဲ့ဘယ်လောက်အထိ သွားနိုင်မလဲ မန်င်ဘာများအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။
ဘာဆက်လုပ်မလဲ။ ဘယ်လိုသွားဖို့ရှိသလည်း မှန်းဆနိုင်လောက်မှာပါ။ အဲဒီအတိုင်းဖြစ်လာဖို့ ကြိုးစားကြဖို့ပါပဲ။
အခုမေးခွန်းတွေဖြေတာဟာ အားလုံးသိစေချင်လို့ အီးမေးလ်နဲ့ပို့တာတွေပါ ရောဖြေလိုက်တာပါ။ အဲဒါကို နားလည်စေချင်ပါတယ်။
ရေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက် အစဖေါ်ပေးလိုက်တဲ့ saund ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တခြားမန်ဘာတွေသိအောင် ပြောထားရရင် saund က ဒီမှာတင်သမျှ စာတွေအတွက် ရတဲ့ပွိုင့်တွေကို မြန်မာပြည်ပို့ လှူဖို့ တောင်းဆိုထားတဲ့ တဦးတည်းသော မြန်မာပြည်ပြင်ပနေ မင်န်ဘာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက်အချိန်ပေးပြီး ရေးမလို့ဟာကိုလည်း အချိန်က မရှိတာနဲ့ ဒီမှာပဲေ၇းလိုက်တာတော့ ခွင့်လွတ်ကြပေါ့။
သိပ်တော့အတိုင်အတော မထူကြပါနဲ့နော။ ၀ါရင့်မန်င်ဘာတွေက နောက်ဝင်လာသူတွေကို ရှင်းပြသွားကြပါ၊ ကျုပ်က အခုသတင်းစာလုပ်ရမဲ့အချိန်ရောက်နေပြီမို့ သတင်းစာလေးထွက်လာအောင် လုံးပမ်းရဦးမယ်မို့ ပါ။
အယ်ဒီတာတို့ ရှင်းပြထားတာကောင်းပါတယ်ကွယ်။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး အများအကျိုးအတွက် သည်ပိုးနေသူတွေကို စိတ်ပျက်အောင် မပြောဆိုသင့်ကြပါ။ မြန်မာပြည် မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်လောက အတွင်းမှာလည်း စာသူခိုးတွေ တစ်ချို့ရှိကြပါတယ်။ သတင်းသမားတွေ ပိုဆိုးကြပါတယ်။ ဖြတ်၊ညှပ်ကပ် ခိုးသူတွေကခိုးကြပါတယ်။ တစ်ချို့က ၏၊သည် မလွဲကူးချရေးသူများလည်း ရှိကြပါတယ်။ သိတဲ့အယ်ဒီတာတွေက အဲဒီစာသူခိုးရေးသူများကို တစ်ကြိမ်သိတာနဲ့ ဆက်ပြီးမသုံးကြတော့ပါ။ အယ်ဒီတာတွေ တစ်ချို့က လုံးဝမသိကြသလို၊ သိပါလျှက်နဲ့ ကိုယ့်ဂျာနယ်ထွက်ရက် မီရေးအတွက် လုပ်နေရသူတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ ပြောချင်တာက စာသူခိုး ငါးခုံးမပုပ် တစ်စုကြောင့် စာပေလောက တစ်လှေလုံး အပုပ်မခံနိုင်ပါ..။ အချိန်တန်တော့လည်း ကိုယ့်သမိုင်းကို ကိုယ်တိုင်ရေးသွားကြပါလိမ့်မယ်..။ ဆရာကြီးလုပ်တယ်တော့ မထင်ကြစေလိုပါ..။ အပြုသဘောနဲ့ အကြံပေးတာပါခင်ဗျား..။
ကျွန်ုပ်တို့ ၏အလွန်ပျော်စရာကောင်းသောရွာကြီးသည် တင်္ဂတိတ်ဆိတ်နေပြီ ဖြစ်၏
ကြောင်အော်သံလည်းမကြား ဆိတ်များပင်လျှင်မပဲ ဟဲဟဲ နိုင်ကြတော့ပေ
မကြာခင်နာရီပိုင်းတွင်း ပြင်းစွာတိုက်ခတ်ခဲ့သော လေမုန်တိုင်းနှင့်အတူ ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော မာရှယ်လောကြောင့်ဖြစ်မည်ထင်မိပါသည်
လမ်းမကြီးပေါ်တွင် မည်သူမျှမရှိကြပေ သရဲခြောက်တတ်သော ညောင်ပင်ကြီးနားရောက်သောအခါ ကျွန်ုပ်ရဲဆေးတင်ရလေတော၏
အောင်ပုကိုလာမညုနဲ့ ရတာနဲ့ ထုတယ်ကွာ ဟုဆိုပြီး ညောင်ပင်ကြီးကိုခဲနှင့်ထုကာ
ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။ ကျမက အီးမေးနဲ့ ဘဲ ပြောချင်တာပါ။ ရှာမတွေ့ လို့ ပို့ အဖြစ် တင်ရတာပါ။
ကော်မဲန့် ထဲက အယ်ဒီတာ ပြောသလို
၁. ခိုးကူးပို့ တွေ ဖြုတ်ပါတယ်၊ ကျန်နေရင် ထပ်ပြောပါ။
ဟုတ်ကဲ့ စာဖတ်သူတွေ ထဲကလည်း သိရင် ရီပို့ လုပ်ကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။
၂. သတင်းစာနဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို ရောမြင်နေတယ်ထင်ပါတယ်။
သြော် ဟုတ်ကဲ့ ကျမ ရေးလိုက်တာ အဓိပါယ်တွေ ရောကုန်တယ် ထင်တယ် ရှင်းပြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
၃. မန္တလေးဂေဇက်ကို မြန်မာစာပေကို ချစ်တဲ့ လူ၂ယောက်ထဲက ကိုယ်အိပ်ကိုယ်စိုက်ပြီး တည်ထောင်ထားတာပါ။
အဲဒီအတွက် ကျမ အံ့သြ ချီးကျူးမိပါတယ်။ အမေရိကားမှာ ကိုယ့်အိတ်စိုက်ပြီး မြန်မာစာပေ ပြန့် ပွားအောင် လုပ်တာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ စာရေးဆရာတွေကို တောင် စာမူရေးနိုင်အောင် အထောက်ပံ့ အဖြစ် (အင်တာနက်ဖိုး) အကူညီ ပေးတယ် ဆိုတာကို ပိုတောင် ချီးကျူးတာပါဘဲ။ ၂၀၀၆ ထဲက စတာ သိပါတယ်။ ပြန်တွက်ရင် အတော်ကြာပီဘဲ ၄နစ်တောင် ရှိပြီ
၄. အဲဒီလိုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖိုရမ်တွေကို စာမူသူခိုးလက်ခံလို့ သုံးရင်ရပါသလား မသိပါ။
မူလစာရေးဆရာတွေ အနေနဲ့ကိုယ်ဖန်တီးတဲ့ စာတိုစာစလေး သူတပါးနာမည်နဲ့ တခြားသော နေရာမှာ တွေ့ ရင် ၉၉% ဒီလိုဘဲ ပြောမှာ သေချာပါတယ်။
၅. တချို့ က နိုင်ငံခြားမီဒီယာက မူပိုင်ခွင့်ရှိနေတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ။ ပုံတွေ။ စာတွေတင်တယ်..
အဲဒီအတွက်တော့ မူရင်းဆိုဒ်တွေကို လင့်ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်ဖြစ်ခဲ့ရင် တောင် မူရင်းစာရေးဆရာ နဲ့ လင့်ကို ဖော်ပြသင့်ပါတယ်။
၆. သိပ်တော့အတိုင်အတော မထူကြပါနဲ့နော။ +
အယ်ဒီတာတို့ ရှင်းပြထားတာကောင်းပါတယ်ကွယ်။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး အများအကျိုးအတွက် သည်ပိုးနေသူတွေကို စိတ်ပျက်အောင် မပြောဆိုသင့်ကြပါ။
တိုင်တောထူတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့ ။ အယ်ဒီတာတွေ အနေနဲ့ ခိုးကူးပို့ ကို မသိလို့ မဖြုတ်နိုင်တာ အခုမှ သိရပါတယ်။ မဖြုတ်နိုင် လို့ ခိုးကူးပို့ စ်တွေ ခုထိရှိနေတာ ရှင်းပြတာကို လည်း လက်ခံပါတယ်။ မရှင်းခင်အထိ အဲဒီပို့ စ်တွေတွေ့ နေသမျှ ဘလော့ကာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မူရင်းစာမူပိုင်ရှင်တွေရဲ့ ခံစားချက်ကို တင်ပြ အကြံပေးတာပါ။ စိတ်ပျက်တယ် ဆိုတာက တဖက်နဲ့ တဖက် အသေချာ မသိကြလို့ တာ ဖြစ်ရတာပါ။ အယ်ဒီတာတွေ အနေနဲ့ ရသမျှ အချိန်လေးမှာ ခိုးကူးပို့ စ်တွေ ရှာအုန်း စစ်အုန်းလုပ်ဖို့ မလွယ်ရင် ရှာထား စစ်ထားတဲ့ ပို့ စ်နဲ့ မူရင်းလင့်တွေကို ရှာပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို ခိုးကူးပို့ စ်တွေကိုဖြုတ်လို့ လွယ်သွားမယ် ထင်ပါတယ်။
ကျမ ပြောချင်တာကို အီးမေးလ်နဲ့ ဘဲ ပို့ ချင်တာပါ။ ပို့ စ်အနေနဲ့ ရေးလိုက်တာက အယ်ဒီတာသို့ အက်မင်သို့ ဆိုတဲ့အီးမေးလ် ရှာမရလို့ ပါ။း-)
အခုလို ပင်မစာမျက်နှာ မရောက်တော့ သိပ်ဟော့မဟုတ်တာဘဲ ခပ်ကောင်းကောင်း။ တော်ကြာ ကျမလဲ ရိုက်ခံရဖို့ များတယ်။
ဒီလိုပို့ စ်တင်ရေးတာကလည်း ကျမတို့ မြန်မာအာကာသ ဘလော့ပိုင်ရှင် ရဲ့ ၂၀၁၂မှာ ကမ္ဘာကြီးပျက်မလား ဆိုတဲ့ ပို့ စ်ကို ဒီမန်းတလေးရတနာပုံမှာ လင်းသစ်ဆိုသူက ခိုးကူးတင်ထားလို့ အယ်ဒီတာတွေကို ပို့ ကို ဆိုဒ်ထဲက ပြန်ဖြုတ်ဖို့ တောင်းဆိုရင်း တခြားတခြားသော ခိုးကူးခံ စာမူပိုင်ရှင်တွေအတွက်ပါ ကိုယ်ချင်းစာခံစားမိလို့အခုလို ထပ်မံ အကြံပေးပါသည် ဆိုတဲ့ ပို့ စ်ဖြစ်လာရတာပါ။
၀င်ရောက်ဆွေးနွေးသူများ အယ်ဒီတာများနဲ့စာဖတ်သူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်